Ihe omuma ndi China nke ndi ulo ahia na ndi n’ahia | Tanso
Ka ọ dị ugbu a, ihe eji eme ihe eji eme ihe na China bụ 45 steel, 40Cr, steel ammoni, 38CrMoAl, alloy temprelu, wdg.
1) Nke 45 iron dị ọnụ ala ma nwee ezigbo nhazi ya, mana nguzogide ya, nguzogide corrosion na iguzogide nká adighi nma.
Okpomoku nke okpomoku: kpochapu ma gbooa hb220-270, okpukpo oku di elu hrc45-48.
2) Ọrụ nke 40Cr dị mma karịa nke ígwè 45, mana ọ na-adịkarị mkpa iji eriri chromium kọọ ya iji gbalite ikike nke corrosion ma yiri nguzogide. Ma ihe achọrọ nke chromium plating oyi akwa dị elu, akwa plating ahụ dị oke mkpa ma dịkwa mfe iyi, oke oke, ọ dị mfe ịdapụ, mana mgbe ịdapụsịrị, ọ na-eme ka corrosion dịkwuo mfe, nke a na-ejibeghị.
Ọgwụgwọ okpomọkụ: hb220-270, chrome chụrụ HRC> 55
3) Nitriding steel na 38CrMoAl nwere ezigbo ọrụ zuru oke ma ejiri ha rụọ ọrụ ọtụtụ. N'ozuzu, oyi akwa nitriding bụ 0.4-0.6mm. Mana ụdị data a nwere ike iguzogide corrosion nke hydrogen chloride site na ike dị ala na ọnụahịa dị elu.
4) data superalloy dị elu karịa data ndị ọzọ. Achọgharịghị data ahụ. A na-eji ihe ka ukwuu n'ime igwe na-akpụzi ụrọ n'ịkpụzi ngwaọrụ. Ihe omuma a nwere nnuku-ogwu, mgbochi nke aru oru na mgbochi oria, yana aru oru hra55`60.
A na-arụ ọrụ mkpuchi injection n'okpuru ọnọdụ okpomọkụ dị elu, mgbali elu, torke dị elu na gburugburu esemokwu ogologo oge. Ọnọdụ ndị mbụ dị mkpa chọrọ ihe ole na ole mbụ, na mfu nke esemokwu ahụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere. Na mkpokọta, a na-ahụrịrị ihe mkpuchi ahụ ka ọ dị elu iji melite ekweghị ekwe n'elu, ya bụ, iji melite nguzogide eyi. Agbanyeghị, ọ bụrụ na-eleghara ihe kpatara eji eyi egwu, ọ bụrụ na-ebelata dịka o kwere omume, ị ga-ebelata ọrụ ịghasa ahụ.
Ndị na-eso nke a na-akọwa ihe kpatara akpata ịgha akwa na ụzọ iji belata eyi
1. Igwe o bula di iche iche nwere acho uzo a na-acho. Ekwesịrị ijikwa ọ̀tụ̀tụ̀ nhazi nke gbọmgbọm ka ọ dị nso na nha a. Igwe ojii ahụ na - abanye n'ime gbọmgbọm nke nri, ọ ga - ebu ụzọ rute ngalaba ndepụta ahụ, nke a ga - egosipụta mgbagha nkụ. Mgbe plastik ndị a enweghị okpomọkụ ma gbazee ahụ na-agbanwe agbanwe, ọ dị mfe ịmepụta mgbidi nke gbọmgbọm ahụ na uwe mpụga nke mpụga. N'otu aka ahụ, na ngalaba na - emechi emechi, ma ọ bụrụ na nsogbu agba nke plastik ahụ, ọ ga - emekwa ka ọ dịkwuo ike.
2. O kwesịrị idozi ọsọ ọsọ nke ọma. N'ihi na a na-agbakwunye plastik ụfọdụ na ihe ndị na-eme ka ume dị ka faibaikal, mineral ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-ese. Esemokwu nke ihe ndị a na ihe ndị ọzọ bụ ọla ka ọ dịkarịsịrị karịa nke plastik a wụrụ awụ. N’ịgba mmiri na plastik ndị a, ọ bụrụ na a na-eji nnukwu ọsọ, mmelite nke ike shiee na rọba ga-ewusi eriri ndị ọzọ akpọnwụ. Etu ahihia nwere nkpuru ime ma na-eyi ihe mgbakwunye Ike. Mgbe ihe ndị dị n’ime ala na-efegharị n’ọkụ dị elu n’elu ọla, ihe na-anyụ anyụ pere mpe. Ya mere, ekwesighi idozi ọsọ ọsọ dị elu.
Oge nzipu ozi: Jun-03-2020